Hargeysa: Ilmo Shan jir Ah Oo Ku Dhintay Maanta Guri Gubtay Oo Uu Lahaa Xildhibaan Cali Aareeye Oo Ku Yaala Xaafada Jig-jiga Yar | Salaan Media
Hargeysa: Ilmo Shan jir Ah Oo Ku Dhintay Maanta Guri Gubtay Oo Uu Lahaa Xildhibaan Cali Aareeye Oo Ku Yaala Xaafada Jig-jiga Yar
“Gurigu wuxuu Gubtay Abaaro salaadii duhur, waxa nalugu yidhi Gabadha Guriga lahayd, ayaa Ilmaha yar iyo Aabihii kaga tagtay Guriga oo Biyo Jaarka u doonatay, dabadeed waxay ku soo noqotay Arladii oo Olol iyo qiiq ka baxayo, Dabka waxa dhaliyayna dadka qaar waxay lahaayeen laydhbuu ka dhashay, qaarna dabkii Guriga ayuu ahaabay yidhaahdeen.” Sidaa waxa tidhi Haweenay goob-jooge ahayd, isla markaana Xaafaddaas deggan.
Waxaanay Haweenaydaas goob-joogaha ahayd intaa ku daray oo ay tidhi; “Markaa, ciddiba isma weydiin sababta dabka dhalisay ee gurmad uun baa la wada galay, waxaana meesha ku soo buuqay dadkii, Dab-damis iyo Ambulance, Carruurtii iyo labadii qof ee waaweynaana markiiba waxa lagu qaaday Gaadhi.” Goob-jooge kale ayaa isaguna sheegay in qoyskan masiibada dabka ahi ku dhacday ka koobnaa Saddex Caruur ah oo laba Hablo tahay, Wiil iyo Labada Waalid, waxaanu yidhi; “Qoysku wuxuu ku koobnaa saddex Caruur ah oo laba Hablo tahay iyo wiilka yar ee dhintay iyo labada waalid, waxaanu Guriga ay degenaayeen ku dhex jiray Guryo badan oo kale, laakiinse ma cadda ilaa hada sida uu dabku u gubay.”
Guriga Gubtay, ayaa la sheegay inuu lahaa Xildhibaan Cali Aareeye oo ka tirsan Mudanayaasha Golaha Wakiiladda Somaliland, kaasoo isaga laftiisu la sheegay inuu deggenaa Guri kale oo ku xiga Aqalka gubtay.
Khasaaraha nafeed ee ka dhasha Guryaha Gubta amase dabka ayaa ku soo badanayay Caasimada Somaliland, xili aanay Magaaladu lahayn Adeega ka hortaga khatarta dabka iyo Gaadiid Dab-damis ah oo ku filan.
Waxaanay ahayd horaantii sanadkan markii uu Dab qabsaday xaafadda isku Raranta ah ee Aqalkii hore ee Gobolka ay ku Baro-kaceen Qoysas badan oo Danyar ah oo halkaasi degenaa,dabkaasoo xiligaasi ay ku Guryo beeleen in ka badan 80 Qoys oo ku noolaal Buulal iyo Jin-gado Macbal ah oo Xaafadaasi uga dhisnaa.